ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတား တည်ဆောက်စဉ် လုပ်သားတစ်ဦး မြစ်အတွင်း ခြေချော်ကျပျောက်ဆုံးခဲ့ရာမှ သုံး? - Yangon Media Group
အောင်လံ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံ-သရက် ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတား တည် ဆောက်ရေးအတွက် သရက်မြို့နယ် စမ်းအိုင့်ကျေးရွာမြစ်ကမ်းအနီး မြေစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေစဉ် အဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်က ခြေချော်ကျ ကာ မြစ်အတွင်း နစ်မြုပ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရာမှ သုံးရက်အကြာ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် ညနေက သေဆုံး လျက် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဧရာဝတီမြစ်ကူး တံတား(သရက်-အောင်လံ) တည် ဆောက်ရေးအဖွဲ့(၃)မှ ဦးကျော် ဌေးနိုင် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် ငါးဦးသည် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် ညနေ ၆ နာရီတွင် မြေစမ်းလုပ်ငန်းသိမ်းကာ စက်လှေနှစ်စင်းတွဲ ဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ရေလည်တိုင်အမှတ် RP-4တည်ဆောက်မည့်နေရာ၌ ကျောက်ချရပ်နားထားခဲ့ပြီး သုံးဦးမှာ ညစာအတွက် စား သောက်ဖွယ်ရာများ အောင်လံမြို့သို့ သွားရောက်ဝယ်ယူနေစဉ် ည ၈ နာရီခွဲခန့်တွင် ကျန်နှစ်ဦးအနက် ဦးစောသိန်းဌေး အသက်(၅၆)နှစ် (မြေစမ်းသပ်)ဆိုသူသည် စက်လှေနှစ်စင်းကြား၌ထားသော မီးစက်အားသွားပိတ်ပြီးပြန်လာစဉ် စက် လှေနှစ်စင်းအကြားသို့ ခြေချော် ပြုတ်ကျသွားခဲ့သည့်အတွက် လှေ ပေါ်၌ကျန်ရှိသည့် ကိုအောင်စိုးဝင်းမှ အသက်ကယ်အင်္ကျီအား ပစ်ချပေးခဲ့သော်လည်း ဦးစောသိန်း ဌေးမှာ ရေစီးအတိုင်း မျောပါသွားခဲ့သည့်အတွက် တံတားတည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းခွင်(အောင်လံ)မှ ဝန်ထမ်းများ၊ သရက်ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် သရက်မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက စက် လှေများဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ဒုရင်္ဂဗိုလ်မြစ် ရေတင်လုပ်ငန်းမြစ်ရေတင်စက် အနီး(ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း) လူ သေအလောင်းတစ်လောင်း တွေ့ရှိကြောင်း ကွမ်းလောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားသဖြင့် ဒုရင်္ဂဗိုလ် နယ်မြေစခန်းမှ ရဲအုပ်သန်းစိုးဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ဦးစောသိန်းဌေး ဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းများအရသိရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်အရ ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကို ဒုရင်္ဂဗိုလ်နယ်မြေစခန်းမှ သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၄/၂ဝ၁၈ ဖြင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
အခွင့်အရေးများ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း အသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးဟု မြန်မာ့လက်ရွေးစင် နည်းပြချု??
မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်၏ အန္တိမ အဂ္ဂိဈာပနအား နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်ညတွင် မြိုင်ကြီးငူဒေသရှိ အေးလင်း သာ
နှာခေါင်းရိုး ကျိုးခဲ့သည့် ရာမို့စ် မည်မျှ အနားယူရမည်ကို မသိရသေး